ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်. Show all posts
မြန်မာ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရဲ့ သင်္ကေတ ဗမာ့စောင်း
ဗမာ့စောင်း ရုပ်ရှင် ပိုစတာ
မြန်မာ - ဂျပန် ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို ဖော်ဆောင်တဲ့ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးရဲ့ သွေး ၀တ္ထု၊ ရဲမြလွင်ရဲ့ သေမင်းနှင့် လက်တကမ်း အလို (ဂျပန် ဘာသာပြန်) အပါ အ၀င် စာပေ အတော် များများ ရှိပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကား အနေနဲ့ အလွန် နည်းပါတယ်။ မကြာသေးခင် နှစ်များက ဂျပန်၊ မြန်မာ ပူးပေါင်းပြီး သွေး ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင် အဖြစ် အသက်သွင်း ဖန်တီး ထားပေမယ့် ယနေ့ အထိ ပြသခွင့် မရသေးပါဘူး။
ဂျပန် စာရေး ဆရာကြီး “မီချီယို တာကဲရာမ ( Michio Takeyama)” ရေးတဲ့ Natto Wada ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကလည်း ဂျပန်မြန်မာ ချစ်ကြည် ရင်းနှီးမှုကို ထင်ဟပ်ပြ ထားပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ကို ဒါရိုက်တာ “ကွန်အိချိကာဝါ (Kon Ichikawa)” က မြန်မာ အေ၀မ်း ရုပ်ရှင် ကုမ္ပဏီရဲ့ အကူအညီနဲ့ ဗမာ့စောင်း (Biruma no tategoto) အင်္ဂလိပ်လို The Burmese Harp လို့ အမည်ပေးပြီး ၁၉၅၆ ခုနှစ်က ရုပ်ရှင် အဖြစ် ရိုက်ကူး ခဲ့ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်တွေ ကတော့ ရီတာရို မိကုနိ (Rentarō Mikuni)၊ ရှိုဂျိယာဆူအိ (Shôji Yasui)၊ ဂျန်ဟာမာမူရာ (Jun Hamamura) တို့ ဦးဆောင် ပါဝင်ထား ပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်ကားကို မုဒုံမြို့နယ်မှာ အခြေခံပြီး ရိုက်ကူး ခဲ့တာပါ။ မြန်မာနဲ့ ဂျပန်တို့ရဲ့ စရိုက် လက္ခဏာကို ပေါင်းစပ်နှီးနွယ် ဖန်တီး တင်ပြထားတဲ့ ဗမာ့စောင်း ရုပ်ရှင်ဟာ စစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံနဲ့ လူသားရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်လှစ်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တခြားသော တိုင်းပြည်တွေက ရုပ်ရှင်အနုပညာနဲ့ ပုံဖော်ရိုက်ကူး မှတ်တမ်း တင်တာတွေကို ဂုဏ်ယူမိသလို၊ သူတို့ ဖန်တီးတဲ့ အနုပညာ အပေါ်မှာလည်း စူးစမ်းချင်စိတ် ဖြစ်မိပါတယ်။ “ငါတို့ ဗမာတွေ အပေါ် သူတို့ ဘယ်လို ထင်သဲ၊ ဘယ်လို မြင်သလဲ၊ ဘယ်လို တင်ပြထား သလဲ” ပေါ့။
အခု ဒီဇာတ်ကားကို မသိမမှီ လိုက်တဲ့ မျိုးဆက်တွေ အတွက် ဗဟုသုတရစေဖို့ ရည်ရွယ် တင်ပြ လိုက်ပါတယ်။
“ဟိုးအဝေးက တိမ်တိုက်တွေကြားဝယ်၊ ဟိမ၀န္တာ တောင်တန်းကြီးနဲ့ နှင်းကလေးတွေ ဖြူဖွေးနေတယ်၊ နှင်းတွေ ပျော်လို့ ရေတွေ စီးလာရင်ကွယ်၊ ငါတို့ကိုယ်ကို ရေချိုး သန့်စင်မယ်၊ ဟိုအဝေးက တနေရာဝယ်၊ မင်းရဲ့ နှလုံးသားက ပုန်းအောင်းနေတယ်၊ အေးစက်တဲ့ ရေတွေ စီးလာ ရင်ကွယ်၊ မောင့်အသည်းနှလုံးကို ဆေးကြော လိုက်ပါ့မယ်”
“အခု ဒီကနေပြီးတော့ ဟိမ၀န္တာဆိုတဲ့ တောင်တန်းကြီးကို ခင်ဗျားမြင်ရလို့လား” ဆိုတော့ ဆံပင်တွေ ဖွာလန်ကြဲပြီး မုတ်ဆိတ်တွေ ဖွေးဖွေးဖြူနေတဲ့ ဗမာ အဘိုးအို ရွာသူကြီးက သီဆိုဖျော်ဖြေနေတဲ့ သီချင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး “ဘယ်ကလာ ဒီကနေ မြင်ရမှာလဲ မာစတာရယ်၊ ရွာထဲမှာ ဟိမန္တာတောင်တန်းကို မြင်ဖူးတဲ့သူလည်း တယောက်မှ မရှိပါဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်းက နားထောင်ဖူးတဲ့ တရားစာတွေ၊ ပုံပြင်တွေထဲမှာ ကြားဖူးတာပါ” လို့ ရှင်းပြတော့မှ ဂျပန် စစ်ဗိုလ်က “သြော် … ဒီလိုပါလား” တဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ကခုန်ပျော်မြူးနေတဲ့ သူတွေ (ဗမာတွေ) တယောက်ပြီး တယောက် ဖျတ်ကနဲ ဖျတ်ကနဲ ပျောက်ပျောက် သွားကြတယ်။ နောက်ဆုံး လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့ စကားပြန် အဘိုးကြီးပါ မရှိတော့ဘူး။ အိမ်တံခါးတွေ လုံအောင်ပိတ်ပြီး နေလိုက်ကြတော့ ဂျပန်တပ်စုကလေးဟာ ပျော်ရွှင်နေတာတွေ ပျောက်ပြီး အထိတ်တလန့် ဖြစ်လာတယ်။
လျှိုမြှောင် ကျောက်နံရံကြီးရဲ့ ကမ်းပါးကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ စိတ်ပျက်အားလျော့စွာ သွားနေကြရတဲ့ ဂျပန်တပ်စုလေးရဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ကို စတင်ပါတယ်။ ရှေ့ခရီးဆက်ဖို့ အတွက် အန္တရာယ် ရှိ၊ မရှိကို သိလိုကြတဲ့အခါ ဗမာရုပ်ပေါက်ပြီး၊ အမြဲ စောင်းတီးကာ သီချင်းဆိုနေလေ့ရှိတဲ့ ဂျပန်စစ်သား “မီဇူရှီးမား” ကို ရှေ့ပြေးကင်းထောက် အဖြစ်လွှတ်ကြရတယ်။ ဂျပန် စစ်ယူနီဖောင်းကို ချွတ်၊ ဗမာပုဆိုးနဲ့ အင်္ကျီကို ၀တ်ကာ စောင်းကို ပိုက်ပြီး “ကျနော် ဗီယက်မာ လူမျောပါ (ကျနော် ဗမာလူမျိုးပါ) ခင်ဗျား” ဆိုတဲ့ စကားကို အတတ်နိုင်ဆုံး ပီသအောင် ပြောပြီး တောထဲကို ပြေးဝင်ပျောက်ကွယ် သွားရလေ့ ရှိတယ်။
ဂျပန်တပ်ဂိတ်နဲ့ မလှမ်းမကမ်း တောတွင်း တနေရာကနေ စောင်းကို ခပ်ကျယ်ကျယ်လေး တီးပြရတယ်၊ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းတယ် ဆိုရင် “ရန်သူ မရှိဘူး၊ အေးဆေးပဲ ချီတက်ခဲ့ကြတော့” ဆိုတဲ့ တီးလုံးဂီတ သင်္ကေတကို တီးပြရတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နေထိုင်တဲ့ ရွာတရွာကို ရောက်လာခဲ့ကြရတယ်။
အခု ဒီရွာမှာ ထိတ်လန့်နေရပြီ။ ဘာပြုလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကြုံတိုင်း ရန်သူက၀ိုင်းပြီး တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရလေ့ ရှိတာကြောင့်ပါ။ ဟန်ကိုယ်ဖို့ ဆိုတဲ့ ဗမာစကားလို သူတို့ဟာ မှုန်ဝါးဝါးလရောင်အောင်မှာ လက်နက်တွေကို အသင့် အနေအထားနဲ့ ပြင်ဆင်ထားရင်း သီချင်းဆိုကြတယ်။
သူတို့ နားစွင့်နေတုန်းမှာပဲ တောတန်းထဲက အင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေဆီက သူတို့ ဂျပန်တွေ သီဆိုနေကျ သီချင်းကို (မိဘဆွေမျိုးတွေကို လွမ်းတဲ့ သီချင်းကို) အင်္ဂလိပ်လို လိုက်ဆိုနေကြတဲ့ အသံ ကြားလိုက်ရတော့ သူတို့ဂျပန်တွေပါ ရောပြီး လိုက်ဆိုကြတော့တယ်။ အဲ့ဒီ ညမှာပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်လောက်က ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံး သွားခဲ့တယ် ဆိုတာကို သူတို့ သိလိုက်ရတယ်။
အခြေအနေက တမျိုးပြောင်းသွားပြီ၊ သူတို့ တပ်စုကလေး လက်နက်ချလိုက်ကြတယ်၊ အုပ်ချုပ်သူ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်က ဂျပန်ရဲဘော်တွေကို “ကဲ … ရဲဘော်တို့ ငါတို့ အားလုံး လက်နက်ချလိုက်ရပြီ၊ ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်လို စဉ်းစား တွေးတောပြီး ဘယ်လို ဖြေသိမ့်ရမယ် ဆိုတာ ငါလည်း မသိဘူး။ အခုက စပြီး ရှေ့လျှောက်ဘာတွေ ဖြစ်လာဦး မလဲ ဆိုတာလည်း မသိနိုင်ဘူး၊ ငါတို့တွေကို ဘယ်အထိ ခေါ်သွားကြမယ်၊ ဘာတွေ လုပ်ကြမယ် ဆိုတာလဲ မသိရတဲ့ အပြင် ငါတို့ကို အသက်ရှင်ခွင့် ဆက်ပေးထားဦးမှာလား၊ မပေးဘူးလား ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းလို့ မရဘူး၊ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ကြဲချလိုက်တဲ့ ကျေညာစာတမ်းတွေ၊ သတင်းစာတွေ အရ ငါတို့ဂျပန်ပြည်ဟာ လေကြောင်းက ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်တာကို ခံရပြီး၊ နေရာအနှံ့ မီးလောင်ကျွမ်း ခံရတယ်၊ လူတွေအများကြီး သေကြေရပြီး အများကြီး ဒဏ်ရာအနာတရတွေ ဖြစ်ကြ ရတယ်၊ ငါတို့ ဂျပန်လူမျိုးတွေ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးတဲ့ အငတ်ဘေး ဆိုက်တာကိုလည်း ကြုံနေကြရတယ် လို့” ပြောတယ်၊ စကားဆုံးတော့ ဂျပန်စစ်သားတွေ ၀မ်းနည်းပူဆွေးစွာနဲ့ ငိုကြွေးကြတယ်။
နောက်တော့ သူတို့ ထင်ထားသလို မဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က အကျယ်ချုပ်သာ ချထားပြီး ကောင်းမွန်စွာနဲ့ တန်းတူထားကာ ဆက်ဆံတဲ့အတွက် သူတို့ စိတ်သက်သာရာရခဲ့ကြတယ်။ တံတားဆောက် လမ်းပြင်တာက လွဲလို့ သူတို့အတွက် ဆိုးဝါးတာ မရှိပါဘူး၊ ဒီလို အခြေအနေကြောင့် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်က မြေပုံအညွှန်းအရ အခြား တနေရာတွေမှာ ရှိနေကြသေးတဲ့ ဂျပန်တပ်စုတွေ အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်မှု ဖြစ်လာတယ်။
ခုလိုအခြေအနေ ရောက်မှတော့ ဂျပန်စစ်သားဘယ်သူ တဦးတယောက်ကိုမှ မသေစေချင်ဘူး။ အဆုံးရှုံး မခံလိုဘူး၊ သူတို့ကို ညှိနှိုင်း ပြောဆိုပြီး မိမိတို့ အုပ်စုလိုပဲ လက်နက်ချဖို့ ဖျောင်းဖျချင်တဲ့ အကြောင်း အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ်ကို ပြောတော့ ခွင့်ပြုချက် ရတယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒီနေရာတွေကို သွားဖို့ သင့်တော်တဲ့သူကို ကြည့်လိုက်တော့ “မီဇူးရှိးမား” ကိုပဲ တွေးရတယ်၊ မီးဇူးရှီးမားက ပေးလာတဲ့ တာဝန်အတိုင်း သွားမယ်လို့ လက်ခံ သဘောတူလိုက်တယ်၊ မီးဇူးရှီးမားက ငြင်းဆန်ခဲ့ရင် ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ဟာ ကိုယ်တိုင်သွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပါ။
တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် အလေးပြုပြီး စောင်းကိုလွယ်ကာ မြန်မာလူမျိုးတဦးလို မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ကို ခေါ်ဆောင်ကာ ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ ဟိုရောက်တော့ ပုန်းအောင်းနေတဲ့ ဂျပန်တပ်စုတွေက မီဇူရှိးမားရဲ့ စကားကို နားမ၀င် လက်မခံကြတဲ့ အပြင် မီဇူရှီးမားကိုပါ ဂျပန်လို့ မထင်ဘဲ မြန်မာသူလျှို တယောက်လို့ စွပ်စွဲကြတယ်။
အဲ့ဒီမှာတင် ထိုးကြကြိတ်ကြနဲ့ ဖြစ်ကုန်တယ်၊ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ သတ်မှတ်နာရီ ကျော်လွန်တဲ့ အတွက်ကြောင့် အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်က တိုက်ခိုက်လို့ အတုံးအရုံး ကျဆုံးကုန်ပါတယ်။
မီဇူးရှိးမားလည်း ကျည်ဆံထိမှန်ပြီး တောင်ကြား တနေရာ ကျောက်ကွဲတာတွေ ကြားမှာ မေ့မြောနေတာကို မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး တပါးက ကယ်တင် စောင့်ရှောက် ကာ ဆေးဝါး ကုသပေးလို့ အသက် ချမ်းသာရာ ရပြီး သူလည်း သဘောကျကာ ခေါင်းတုံးရိတ်ပြီး သင်္ကန်း ၀တ်လိုက် ပါတယ်။
သစ်ခုတ် သမားတဦး လှူတဲ့ ကြက်တူရွေးလေးကို ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး သေဆုံး ခဲ့ကြတဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေရဲ့ အလောင်းတွေကို မီးရှို့ရင်း၊ မြေမြှုပ်ရင်း လျှောက် သွားနေ ပါတယ်။ လွှတ်လိုက် မိတဲ့ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်မှာလည်း သူ့ရဲ့ ဂျပန်ရဲဘော်တွေနဲ့ အတူ စိတ်လက် မချမ်းသာစွာနဲ့ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း မီဇူရှိးမား တယောက် စောင်းကို ပိုက်ကာ ဘွားကနဲ ပြန်ရောက်လာနိုး ရောက်လာနိုးနဲ့ မျှော်လင့်နေ ကြပါတယ်။
သင်္ကန်းဝတ်ထားတဲ့ မီဇူးရှီးမားဟာ သူ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်သူ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်ကို ပေးဖို့ တနေ့တနေ့ စာတွေပဲ ရေးနေပါတယ်။ တနေ့မှာတော့ စစ်သုံးပန်း အဖြစ် အချုပ်ခံထားရတဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေကို သင်္ဘောနဲ့ တင်ပြီး အမိ တိုင်းပြည် ပြန်ပို့မယ့် အစီအစဉ် ဖြစ်ပေါ် လာပါတယ်။
သူတို့တွေ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးပေါ် တက်ခါနီးမှာ ဂျပန်လို ပြောတတ်တဲ့ ဗမာဈေးသည် အဖွားကြီးဆီက တဆင့် စာအိတ်ရှည်ကြီး နှစ်လုံးရောက်လာပါတယ်။ သင်္ဘောထွက်လို့ လူစုတဲ့ အခါမှာ ဂျပန်စစ်ဗိုလ်က ဖောက်ဖတ်ပြ လိုက်တယ်။
“ကျနော့်အဖို့တော့ ဂျပန်ပြည်ကို ပြန်မလိုက်နိုင်တော့ပါဘူး၊ ခင်ဗျားတို့ လမ်းမှာ ဖျက်ကနဲ မြင်လိုက်ရတဲ့ ရဟန်း တပါးဟာ ကျနော် မီဇူးရှီးမားပါပဲ၊ ရဟန်းဝတ်နဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ နေရာ အနှံ့အပြားမှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ဂျပန်စစ်သား အလောင်းတွေ၊ အရိုးတွေကို မီးသင်္ဂြိုဟ် ရဦးမယ်၊ ခင်ဗျားတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထောင်သာင်းမက များလှတဲ့ ဂျပန် လူငယ်တွေကို အတင်း အဓမ္မ စုဆောင်းပြီး စစ်ထဲကို သွင်းခဲ့ကြတယ်၊ ပြီးတော့ စစ်ရှုံး ဘ၀နဲ့ သူတို့ အသတ် ခံရတယ်၊ သူတို့ အလောင်းတွေကို ခွေးစားစား ကျီးထိုးထိုး ဒီအတိုင်း ပစ်ထား ခဲ့ကြတယ်၊ ဘယ်လောက် ရင်နာဖို့ ကောင်းလိုက် သလဲ၊ ဒါတွေကိုကျနော် ဒီအတိုင်း ပစ်မထားနိုင်ဘူး၊ တခုခု မလုပ်မချင်း ကျနော်ရဲ့ ခြေထောက် တွေကို ဒီမြေပေါ်က ခွာလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ဗမာ့မြေပေါ်မှာ သွေးသံ ရဲရဲတွေက နောက်ဆုံးတော့ ကျောက်အဖြစ် ကျန်ရစ် ခဲ့လိမ့်မယ်။ အားလုံးကို ချစ်တဲ့ မီးဇူရှီးမား ရဟန်း” တဲ့။
Burmese Harp （ビルマの竪琴）Part-1
Burmese Harp （ビルマの竪琴）Part-2
Originally published at -http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/07/31/119384.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, July 31, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်, နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်
သွေးမျက်ရည်၊ ချိုမြိန်ချစ်ခြင်းနဲ့ ဓားစာခံဖြစ် သွားရတဲ့ နှလုံးသား
The Land of Blood and Honey ဇာတ်ကား အခွေ ကာဗာ
သွေးမျက်ရည်နဲ့ ချိုမြိန် ချစ်ခြင်းတို့ နယ်မြေလို့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ (The Land of Blood And Honey) ဇာတ်ကားဟာ ဘော့စနီးယားက ပန်းချီ ဆရာမလေး အဂျလာ (Ajla) ရဲ့ ကြေကွဲ ဖွယ်ရာ ဘ၀ ဇာတ်သိမ်း သွားရပုံ အကြောင်းကို ကမ္ဘာကျော် မင်းသမီး အင်ဂျလီနာ ဂျိုလီက ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ရိုက်ကူး ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိုလီဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်က A Place in Time ရုပ်ရှင်မှာ ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာ လုပ်ခဲ့ပြီး ဒီကားက ဒုတိယ မြောက် ဇာတ်ကားပါ။ ဂျိုလီဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Unbroken ဇာတ်ကား၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ By the Sea ဇာတ်ကားတွေ ကိုလည်း ဒါရိုက်တာ လုပ်ပြီး ရိုက်ကူး တင်ပြခဲ့ ပါသေးတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၅ ခုနှစ် အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဘော့စနီးယား စစ်ပွဲကြီးအတွင်း ကိုယ်တိုင် ရောက်ရှိသွားသလို ကြည့်ရ မြင်ရတော့ ရင်သပ်ရှုမော ပါးစပ် အဟောင်း သားနဲ့ ထိတ်လန့်မှု၊ တုန်လှုပ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့ ကြေကွဲမှုတွေ ကိုလည်း ဇာတ်ကားကို ကြည့်ရင်း ခံစား ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘာသာရေး မလိုမုန်းတီးမှု၊ သတ်ဖြတ် အနိုင်ကျင့်မှုတွေ ဟာ ယဉ်ကျေးပါတယ် ဆိုတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အမှောင်ဘက်ထဲက ရိုင်းစိုင်းမှုတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မီးမောင်း ထိုးပြနေပါတယ်။
၁၉၉၁ ခုနှစ် ကစပြီး ယူဂိုစလားဗီးယား နိုင်ငံဟောင်းထဲက ဘော့စနီးယား၊ ဆာဗီးယား၊ ခရိုအေးရှားဆိုတဲ့ ဘာသာမတူ ကွဲပြားတဲ့ လူမျိုးစု နိုင်ငံသုံးခုဟာ ပဋိပက္ခ စစ်မက် ဖြစ်ပွားကြပါတယ်။ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ပဋိပက္ခတွေ မငြိမ်းနိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ အပြစ်ရှိသူရော အပြစ်မရှိသူရော ၁ သိန်းကျော် သေဆုံးသွားခဲ့ရပြီး၊ မိန်းမပေါင်း သောင်းချီပြီး အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုတွေ ဖြစ်ပွားတဲ့ စစ်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ဟန်ဂေရီ နိုင်ငံမှာ ဆက်တင်တွေဆောက်ပြီး အစားထိုး ရိုက်ကူးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျလီနာဂျိုလီဟာ စစ်ရဲ့ အနိဋ္ဌာရုံနဲ့ ရက်စက်မှုတွေကို ပီပြင်အောင် ရိုက်ကူးတင်ပြ နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေသသုံး ဘာသာစကားကို သုံးပြီး၊ ဘော့စနီးယား၊ ခရိုအေးရှားနဲ့ ဆာဗီးယား လူမျိုးတွေကိုပဲ ပြန်သရုပ်ဆောင်ခိုင်းခဲ့ပါ တယ်။ အဓိက ဇာတ်ကောင်နှစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ဆာဗီယားလူမျိုး ဗိုလ်မှူး “ဒင်နီယယ်” နဲ့ ဘော့စနီးယား အမျိုးသမီး ပန်းချီဆရာမလေး “အဂျလာ” တို့ ၂ ယောက်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ရာ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို တင်ပြထားတာပါ။
ဒင်နီယယ်အဖြစ် ဒေသခံမင်းသား “ဂိုရန်ကို့စ်တစ်” က သရုပ်ဆောင်ပြီး၊ အဂျလာ အဖြစ်ကိုတော့ ဒေသခံမင်းသမီး “ဇာနာ မာဂျန်နိုဗစ်” က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကို အဂျလာ တယောက် ညီမဖြစ်သူရဲ့သားလေးကို ပုခက်ထဲ ထည့်ကာ လွှဲပေးနေရင်း ပန်းချီဆွဲနေတဲ့ အခန်းနဲ့ စတင်ထားပါတယ်။
The Land of Blood and Honey ဇာတ်ကား ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခု
အဂျလာရဲ့ ညီမဖြစ်သူ “လေလာ” ဟာ စစ်ပွဲမှာ ယောက်ျားဖြစ်သူ သေဆုံး သွားခဲ့ တာကြောင့် လသား အရွယ် ကလေးငယ်နဲ့ အစ်မဖြစ်သူကို မှီခိုရင်း အတူနေထိုင် ကြပါတယ်။ ညီအစ်မ ၂ ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းလို တမျိုး၊ ညီအစ်မလို တဖုံနဲ့ အလွန် ချစ်ခင်တွယ်တာ ကြပါတယ်။ ဆွဲနေတဲ့ ပန်းချီကား တပိုင်းတစကို ပစ်ထားပြီး ပုခက်ထဲမှာ ငိုနေတဲ့ ကလေးငယ်ကို ပွေ့ချီရင်း ညီမဖြစ်သူ လေလာ အခန်းထဲက ထွက်လာတော့မှ လှမ်းပေးကာ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ ဒင်နီယယ်နဲ့ ပါတီပွဲမှာ ချိန်းထားတာကို သတိရလို့ အခန်းထဲ အပြေးဝင်ကာ အ၀တ်လဲ အလှပြင်ပါတယ်။
ပိုပြီး ချစ်ဖွယ်ကောင်းအောင် ညီမဖြစ်သူလေလာရဲ့ ထပ်မံ ပြင်ဆင်ပေးတာကို လက်ခံပြီး ပါတီပွဲကို ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပါတီပွဲဟာ သူ့အတွက် တသက်လုံး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျစေလိမ့်မယ် ဆိုတာကို မသိခဲ့ရှာပါဘူး။ ပါတီပွဲမှာ ချစ်သူ ဒင်နီယယ်နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ တွဲကနေတုန်း၊ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မလို့ အသက်မသေဘဲ ကျန်နေသူများထဲမှာ အဂျလာနဲ့ ဒင်နီယယ်တို့ ၂ ယောက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
အိမ်ပြန်ရောက်ပြီး နောက်တနေ့မှာ ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးအဖြစ်နဲ့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လေမလဲ ဆိုတာကို အဂျလာတို့ ညီမနှစ်ယောက် ခန့်မှန်းသိနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘေးကင်းနိုင်တဲ့ အနီးဆုံး နိုင်ငံတခုကို ထွက်သွားဖို့ ညီအစ်မနှစ်ယောက် ခရီးဆောင်အိတ်ထဲကို အ၀တ်အထည်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင်တွေ အမြန်ထည့်နေပါတယ်။ အရေးထဲမှာ ပတ်စပို့က ရုတ်တရက် ရှာမတွေ့ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် သူတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ နောက်ကျသွားခဲ့ရပါတယ်။ ဆားဗီးယား စစ်အုပ်စုဟာ စစ်ကားကြီးတွေနဲ့ အမြန်ရောက်လာပြီး အဂျလာတို့တိုက်ကို စီးနင်းလိုက်ကြပါတယ်။
ယောက်ျားမှန်သမျှ သတ်ပစ်ဖို့ ဖမ်းဆီးသွားပြီး၊ မိန်းမမှန်သမျှကိုတော့ ခြံဝင်းအကျယ်ကြီးထဲ ပို့ကာ စစ်သားတွေက မုဒိမ်းကျင့် ပါတော့တယ်၊ ကလေးငယ်နဲ့မို့ ညီမဖြစ်သူ လေလာကတော့ လွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားပြီး အခန်းကို ပြန်လာခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ မိန်းမတွေ အုပ်စုထဲမှာ အဂျလာ ပါလာတာကို ဒင်နီယယ်က မြင်သွားပြီး “ဒီမိန်းမတော့ မင်းကြိုက်မယ် မထင်ပါဘူး၊ ငါ့အတွက် ထားလိုက်ပါ” ဆိုပြီး ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။
အဂျလာက သူချစ်ခဲ့တဲ့သူဟာ ဘော့စနီးယား ဆာ့ဗ်လူမျိုး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး “နီဘိုးဆာ” ရဲ့ သားဖြစ်နေပြီး ဒီစစ်ဘီလူး တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူး တဦးဆိုတာကို သိလိုက်ရတဲ့အခါ သူဟာ အတော်တုန်လှုပ် သွားပါတော့တယ်။ သွေးအလိမ်းလိမ်းနဲ့ နှိပ်စက်မှု ပေါင်းများစွာကို ခံနေရတဲ့ မိန်းမတွေကြားမှာ နေရပေမယ့် ဒင်နီယယ် ရှိနေလို့လည်း အနည်းငယ် စိတ်သက်သာရာ ရပါတယ်။
သူတို့ ၂ ယောက်ရဲ့ အခြေအနေကို အကဲခတ်မိတဲ့ စစ်သားတွေက သံသယ၀င်လာကြတဲ့ အတွက် “ငါမင်းကို ကြာရှည် ကာကွယ် မပေးနိုင်ဘူး၊ မင်းလွတ်အောင်ပြေးတော့” ဆိုပြီး လွှတ်ပေးလိုက်လို့ တညမှာ အဆောက်အအုံရဲ့ အနောက်ဘက် တောထဲကနေ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထွက်ပြေးရင်း သူရဲ့ လူမျိုးစု တော်လှန်ရေး သမားတွေဆီ ရောက်သွားတော့ သားလေးသေဆုံးလို့ ရောက်နေတဲ့ ညီမ လေလာနဲ့ ပြန်ဆုံရပါတယ်။ အဲဒီမှာ ညီအစ်မ ၂ ယောက် တိုင်ပင်ပြီး စွန့်စားခန်းတခုကို ပြင်ဆင်ကြပါတယ်။
အဲဒီ စွန့်စားခန်း ကတော့ အဂျလာက ဒင်နီယယ်ကို တအားချစ်လို့ မခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီး ပြန်လာဇွတ်တိုးတဲ့ ပုံစံနဲ့ ဒင်နီယယ်ဆီကို ပြန်ဝင်ပါတယ်။ ဒင်နီယယ်ကလည်း ယုံကြည်ပြီး သူ့အခန်းမှာပဲ ထားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပန်းချီဆရာမမှန်း သိသွားတော့ ပိုလေးစားလာပြီး ပန်းချီဆွဲစရာ ပစ္စည်းတွေ ရှာပေးကာ ပန်းချီဆွဲစေ ပါတယ်။
ညဘက်မှာ ခိုးချောင်ခိုးဝှက်နဲ့ ပန်းချီပြတိုက်ကြီးဆီကို ၂ ယောက်အတူသွားကာ အနုပညာလက်ရာတွေကို လက်နှိပ် ဓာတ်မီး အလင်းရောင်နဲ့ ခံစားကြပါတယ်။ ပန်းချီဆရာ နာမည်တွေ၊ ပန်းချီလက်ရာတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေကို ဒင်နီယယ် မေးမြန်းသမျှ ပန်းချီဆရာမ အဂျလာက စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြရပါတယ်။
အဲဒီရက်ပိုင်း အတွင်းမှာပဲ ဒင်နီယယ်တို့ ဆာ့ဗ်လူမျိုးစု စစ်သားတွေဟာ ဖောက်ခွဲမှု အမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြပြီး အကျအရှုံး များစွာနဲ့လည်း ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ တိုက်ခိုက်မှု အမျိုးမျိုးတွေရဲ့ ဒဏ်ကို ခံကြရပြီး အကျအရှုံးတွေ သေဆုံးမှုတွေကို ခံရပြီးတဲ့ နောက်တနေ့မှာ ဒင်နီယယ်ကိုယ်တိုင် ပေါက်ကွဲမှုတခုကြောင့် လွှင့်စင်သွားပြီး အားယူကာ ကုန်းထနေ တုန်းမှာ ယမ်းခိုးယမ်းငွေ့တွေကြားကနေ မြင်လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းတခုကြောင့် ဒင်နီယယ် အံ့အားသင့် သွားပါတယ်။
အဲဒါကတော့ အဂျလာရဲ့ညီမ လေလာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို မြင်လိုက်ရလို့ ပါပဲ။ ဒင်နီယယ်ဟာ ချက်ချင်းပဲ ဒီ အဖြစ်အပျက်ဟာ သူတို့ ညီအစ်မ ၂ ယောက်ရဲ့ လက်ချက်ပဲ ဆိုတာကို ဒင်နီယယ် သဘောပေါက်သွားပါတယ်။ ဒင်နီယယ်ဟာ ယမ်းငွေ့တွေကြားက ဖုန်အလိမ်းလိမ်း ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ သူပိုင်တဲ့ အခန်းဆီ အပြေးသွားတော့ အဂျလာက အရာရာကို ဘာမှမသိသလို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ ကင်းဗတ်အဖြူရောင်ပေါ်မှာ အနီရောင်စုတ်ချက်တွေနဲ့ ပန်းချီကားတချပ် ဖန်တီး ရေးဆွဲနေပါတယ်။
ဒင်နီယယ်ဟာ ဒေါသနဲ့ ဆောင့်တွန်း ပစ်လိုက်ပြီး ပုံလျက်သား လဲကျသွားတဲ့ အဂျလာကို ခါးကြားက သေနတ်နဲ့ ချက်ချင်း ကောက်ချိန်ကာ ပစ်ချဖို့ လုပ်တော့ အဂျလာက “ကျမ မှားပါတယ်” လို့ တောင်းပန်တယ်။ သူဟာ တချိန်မှာ ဒီလိုကြုံရမယ် ဆိုတာကို ကြိုသိနေတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် တုန်လှုပ်မှုတွေ မရှိပါဘူး၊ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ။
ပြီးတော့မှ ဒင်နီယယ်ရှေ့မှာ ဒူးထောက် ထိုင်ချလိုက်ပြီး ငိုကြွေးလိုက်ပါတယ်။ သူရဲ့ငိုကြွေးသံအဆုံးမှာပဲ ဒင်နီယယ်က ပစ်သတ်လိုက် ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ စစ်တလင်းပြင်ရဲ့ အကျအဆုံးတွေကြားကို ပြေးသွားကာ “သူ” ဟာ ရာဇ၀တ် ကောင်ပါလို့ အော်ပြီး အဖမ်းခံရင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို နိဂုံးချုပ် အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်ရင်တော့ အောက်က လင့်တွေထဲက တစ်ခုကို ရွေးချယ်၍ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/07/24/118919.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, July 25, 20163comments:
အကြမ်းတမ်းဆုံး မြန်မာ့ စစ်မြေပြင်
Objective, Burma! ဇာတ်ကားဟာ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အတွင်းမှာ ဗမာပြည်ရဲ့ ဖြစ်ပျက် ကြုံတွေ့ ခံစား ရတာတွေကို ရိုက်ကူး ထားတဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ စစ်မြေပြင် အကြောင်း ဇာတ်ကား တကား ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ ခေတ်ကို တော်လှန် တိုက်ခိုက်ဖို့ အတွက် ရဲဘော် ၃ ကျိပ်ဟာ ဂျပန်အစိုးရကို အကူ အညီ တောင်းခဲ့လို့ ဂျပန် စစ်တပ်ဟာ ဗမာ့ တပ်မတော်နဲ့ အတူ ၀င်ရောက် လာခဲ့ ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ် စစ်တပ်ကို တိုက်ခိုက် အောင်မြင် ပြီးတော့ ဗမာ့ပြည်ဟာ သူတို့ ပိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ဖက်ဆစ် တို့ရဲ့ အရိုင်း အစိုင်း စ်ိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဘာသာ၊ သာသနာ အပေါ်မှာရော တိုင်းသူပြည်သား တို့ရဲ့အပေါ် မှာရော ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာ အနိုင်ကျင့် ဗိုလ်ကျ စိုးမိုးမှုတွေ လုပ်လာ ပါတယ်။
“ကဲ အောင်ဆန်းရေ၊ မင်းပင့်လာတဲ့ ဘုရား မင်းပြန်ပို့ဖို့ လုပ်ပေတော့” ဆိုတဲ့ ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ စကား အတိုင်း ဖက်ဆစ် ဂျပန်ကို ပြန်လည် နှင်ထုတ်ဖို့ အတွက် အင်္ဂလိပ်ကို မဟာမိတ် အဖြစ် ပြုရပြန် ပါတယ်။
ဒီအကြောင်းကို ဒါရိုက်တာ ရာအူးလ် ဝေါ့လ်ရှ် (Raoul Walsh) က ရိုက်ကူးပြီး ၀ါနာ ဘရားသား ကုမ္ပဏီက ၁၉၄၅ မှာ ထုတ်လုပ် ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကားရဲ့ ပြသမှု ကြာမြင့် ချိန်ဟာ ၁၄၂ မိနစ်ဖြစ်ပြီး၊ အဖြူအမည်း ဇာတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင် ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင် အဖြစ် သရုပ်ဆောင် ရမယ့် သူကိုတော့ အာရိုးလ် ဖလင်း (Errol Flynn) ကို ရွေးချယ် ခဲ့ကြပါတယ်။
“ဗမာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြမ်းတမ်းဆုံး စစ်မြေပြင်” ဆိုတဲ့ စာတမ်းကြီးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို စတင် ပါတယ်။ အလွန် တိုတောင်းတဲ့ ကာလ အတွင်းမှာပဲ ဂျပန်တွေဟာ ဗမာပြည်ရဲ့ လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်လောက်အောင် အောင်မြင်နေပါတယ်။ ဗမာပြည်ရဲ့ ထွက်ပေါက်လမ်းတွေ မှန်သမျှကို ပိတ်ဆို့ထားနိုင်သလို တရုတ်ပြည်ဘက် ထွက်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ အနောက်ဘက်ကို လည်း ပိတ်ဆို့ထားလို့ ပြန်ပွင့်အောင် လုပ်ရမယ့် အချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက် အမေရိကန်တွေ၊ တရုတ်နယ် တပ်တွေ အပါအ၀င် အင်္ဂလိပ် စစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အတွင်းက သူတို့ရဲ့ဌာနချုပ် တွေမှာ ခေါင်းချင်း ရိုက်ကာ အလုပ်ရှုပ်နေ ကြပါတော့တယ်။ “မောင့်ဘက်တန်” ရဲ့ အိန္ဒိယ အခြေစိုက် စစ်ဌာနချုပ် တခုမှာ လျှို့ဝှက်ချက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ လျှို့ဝှက် ပြင်ဆင်မှုတွေ ကလည်း လ အတော်ကြာ ခရီးပေါက် နေပြီဖြစ်တဲ့ ပူးပေါင်း စစ်ဆင်ရေးကို စတင်ဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိသျှ ဗိုလ်ချုပ် “ဝင်းဂိတ်”က သူရဲ့ စစ်တပ်မဟာ ကြီးထဲက စစ်သားပေါင်း မြောက်မြားစွာနဲ့ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်နေ သလို၊ ဗိုလ်ချုပ် စတီးဝဲလ် ကလည်း သူ့ရဲ့ တရုတ် တပ်သားတွေရဲ့ လေ့ကျင့်ရေးကို အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက် နေပါတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အထူး ကွန်မန်ဒိုတွေကို ဗိုလ်မှူးကြီး “ဘီကော့ခရန်” ရဲ့ လက်အောက်မှာ ချထားပြီး၊ မာရေးမရူးဒါး လို့ ခေါ်တဲ့ရှေ့ပြေးတပ်ကလည်း ဗမာပြည်ရဲ့တောနက်ကြီး ထဲကို ထွက်ခွာဖို့ အသင့်ဖြစ် နေပါတယ်။ ရှေ့ပြေးကင်းထောက် လေယာဉ်က ဗမာပြည်ရဲ့ တောနက်ကြီးတွေ ထဲမှာ ရေဒါစနစ်နဲ့ ဂျပန်တွေရဲ့ အခိုင်အမာ တပ်စွဲထားတဲ့ စခန်းတွေကို ကောင်းကင် ကနေ လျှို့ဝှက် ပျံသန်းပြီး ထောက်လှမ်းကာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်လာနိုင်တဲ့ အချိန်ကို မျှော်နေ ကြရ ပါတယ်။
ရှေ့ပြေး ကင်းထောက် လေယာဉ်ဟာ အိန္ဒိယ နယ်စပ်တောထဲမှာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ ခိုအောင်းရာကို ထောက်လှမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံ အညွှန်းတွေအရ တရုတ်နိုင်ငံထဲကို ပျံသန်းနေတဲ့ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ လေယာဉ်တွေကို ရုပ်ဖျက်ပြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းနေတဲ့ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ ရေဒါ စနစ်ကို ရှာဖွေပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ အတွက် လေကြောင်း ကနေ လေထီးနဲ့ ဆင်းနေ ရမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အခြေအနေကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် သုံးသပ် ညွှန်ကြားနိုင်မယ့်၊ မိမိတို့ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ရှင်းပြနိုင်ဖို့ ဝါရင့် စစ်သတင်းထောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ တရုတ် ဗိုလ်ကြီး (သရုပ်ဆောင် ဟင်နရီ ဟောလ်) နဲ့ ဂေါ်ရခါးလမ်းပြတွေကို သီးသီး သန့်သန့် တာဝန် ခွဲဝေပြီး ဆွေးနွေးကြ ရပြန်ပါတယ်။
ဒီကိစ္စအတွက် ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ကို တာဝန်ပေးပါတယ်။ လူ ၃၆ ယောက်ပါတဲ့ အဖွဲ့ကို ဦးစီးပြီး၊ ကောင်းကင်ကနေ ညအချိန်မှာ လေထီးနဲ့ ခုန်ချကြကာ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေရဲ့ အရေးပါတဲ့ ရေဒါစခန်းကြီးကို ရှာဖွေတိုက်ခိုက်ပြီး ဖျက်ဆီးပစ် ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေဟာ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကို ပြန်လည်ရိုက်ကူး တင်ပြတာလည်းဖြစ်ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ် အကယ်ဒမီ ဆု ၃ ခုအတွက် ဆန်ခါတင် ပါခဲ့ပါတယ်။ တည်းဖြတ်မှု၊ ဂီတနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆိုတွေအတွက် ဆန်ခါတင် ပါတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ပဲ အတွေ့အကြုံ ရှိခဲ့ပါတယ်ပြောပြော မှောင်မည်းနေတဲ့ ညကြီးသန်းခေါင်မှာ ဟိုအာကာသ အမြင့်ကြီးကနေ ဆူးငြောင့်ခလုတ်တွေ ဘာတွေ ရှိမှန်းမသိတဲ့
တောထဲကို လေထီးနဲ့ ခုန်ချဖို့အတွက် လေထီးစစ်သား ၃၆ ယောက်လုံးဟာ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြေပြင်ကို ကံကောင်းထောက်မစွာ ၃၆ ယောက်လုံး အဆင်ပြေပြေ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
အထက်က ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အရေးကြီးတဲ့ ဖက်ဆစ်တို့ရဲ့ ရေဒါစခန်းကြီးကို ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အမိနိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ အတွက် ဆုံမှတ်ကို သွားတဲ့အခါမှာတော့ သူတို့ကို ဖြတ်စောင့်နေတဲ့ ဂျပန်စစ်တပ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ရပါတော့တယ်။
အထက်က ညွှန်ကြားတာကတော့ လေယာဉ် ဆင်းစရာနေရာ မရှိတဲ့အတွက် ရန်သူနဲ့ လွတ်ကင်းတဲ့ နေရာကို ရောက်အောင်သွားဖို့ ညွှန်ကြားလာတာကြောင့် ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ဟာ တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူ မိုင် ၁၅၀ ခရီးကို ချင်းတွင်းမြစ်ကြောင်းနဲ့ အပြိုင် တောတွင်းမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။
စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေကို လျှော့ချပြီး လူသူမနေတဲ့ ဗမာရွာလေးတရွာမှာ ပြန်ဆုံဖို့ ၃၆ ယောက် အုပ်စုကို အဖွဲ့ခွဲလိုက်ရပါတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ တပ်ကြပ်ကြီး ဂျက်ကော့ဖ် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့ဟာ ဖက်ဆစ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ၂ ယောက်ပဲ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ကြီး နယ်လ်ဆင်ဟာ ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုကြားထဲက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရပ်တည်ရင်း အသက်ရှင်ကျန်နေတဲ့ စစ်သားတွေကို စုစည်းပြီး ရန်သူ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေ နေရာကို ရောက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြရပါတယ်။
သတ်မှတ် ကာလတွေထက် ရန်သူ့နယ်ပယ်ထဲမှာ စွန့်စားနေရပြီးမှ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ ရဟတ်ယာဉ်က ပြန်လည် ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၄ မှာ ဗမာပြည်အတွင်း ကျူးကျော် ရက်စက်တဲ့ ဖက်ဆစ်ကို မောင်းထုတ် အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။ တာဝန် အလဲအလှယ် လုပ်ပုံမျိုးနဲ့ ရုပ်ရှင်ကို အဆုံးသတ် ထားပါတယ်။
၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ Objective, Burma! ရုပ်ရှင်ဟာ ပြင်သစ်မှာလည်း နာမည်ကြီး လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
ကြည်ချင်သူများ ဒီလင်ကိုယူသွား - http://movietubenow.me/movie/objective-burma
Originally published at - http://burma.irrawaddy.com/lifestyle/2016/07/03/117521.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, July 03, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်, မြန်မာရေးရာ
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း (Fifty Shade of Black)
- ဒီနေ့ အတွက်တော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး ဖြစ်အောင် ဟာသကား တစ်ကား နဲ့ပဲ မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီး လိင်အသားပေး အချစ် ဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ Fifty Shade of Grey ဇာတ်ကားကို မှတ်မိ ဦးမယ် ထင်ပါတယ်။
အခုပြောပြမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းကို သရော်ထားတဲ့ Fifty Shade of Black ဖြစ်ပါ တယ်။
မူရင်း Fifty Shade of Grey ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိပြီးဖြစ်မယ် ထင်တာကြောင့် ဇာတ်လမ်း အကြောင်းအရာ ကိုတော့ ထွေထွေ ထူးထူး ရှင်းပြဖို့ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားမှာမင်းသားအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်တဲ့သူက နာမည်ကြီး ဟာသဇာတ်ကားတွေဖြစ်တဲ့ White Chick၊ Scary Movie 1-2 စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေနဲ့ လူသိများတဲ့ Marlon Wayans ဖြစ်ပါတယ်။
မူရင်း ဇာတ်ကားထဲက လူပြောများတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း အများစုကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဦးစားပေး လှောင်ပြောင် ထားပြီး တချို့ အခန်းတွေသာ အနည်းငယ်ပဲ ပြောင်းလဲပြီး ထည့်သွင်း ထားပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦး စပြီးဆုံတဲ့ အခန်းတွေ၊ အင်တာဗျူး လုပ်တာတွေက စပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ် ယောက် စိတ်ဝင် စားကြတဲ့ ပုံစံတွေက စလို့ မူရင်း ဇာတ်ကားမှာ သူဌေးသား Grey ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် အခန်းထဲက လိင်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လွန်လွန် ကျူးကျူး စိတ်ဝင်စား တဲ့ အခန်းတွေကို ပယ်ပယ် နယ်နယ် သရော်ထား ပါတယ်။
မူရင်းစတင် ထွက်ရှိခဲ့စဉ် ကတည်းက ဝေဖန်မှုတွေ ဆူညံခဲ့တဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို အခု ဟာသ ဇာတ်လမ်း အနေနဲ့ လှောင်ပြောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ အပေါ်မှာတော့ ပရိသတ် တော်တော် များများ အကြိုက်တွေ ကြပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားတွေကို ပရိသတ် အကြိုက် အဆင့် သတ်မှတ်ပေးတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် တချို့မှာတော့ အဆင့်ကောင်းတွေ ရထားတာမျိုးတော့ မရှိပါဘူး။
နောက်ဒီဇာတ် ကားက မိသားစုကြည့်လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီနေ့အတွက်တော့ Fifty Shade of Black ကို ဟာသအနေနဲ့ ရွေးချယ်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Originally published at - http://www.7daydaily.com/story/58066
ရုပ်ရှင် အကြိုခံစားခြင်း ( Bad Guys Always Die )
ဒီနေ့ အကြို ခံစားကြည့်ဖို့ ကိုတော့ တရုတ် - ကိုရီးယား ဟာသ အက်ရှင် ဇာတ်ကားလေး အကြောင်း ပြောပြ ချင်ပါတယ်။
ထိုင်ဝမ်သရုပ်ဆောင် ချန်ဘိုလင်းနဲ့ ကိုရီးယား ထိပ်တန်း မင်းသမီး ဆွန်ရယ်ဂျင်တို့ ခေါင်းဆောင် ပါဝင်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ခရီးသွားတွေ အကြား နာမည်ကျော် လှတဲ့ ဂျယ်ဂျူကျွန်းမှာ ဇာတ်အိမ်တည် ရိုက်ကူး ထားတာမို့ ဇာတ်ကွက်တွေ အပြင် ဂျယ်ဂျူကျွန်း အလှအပတွေ ကိုပါ ကြည့်ရမှာပါ။
ချန်ဇုဟာဘူဆန်မှာနေတဲ့ တရုတ် လူမျိုး ဆရာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သူ့ညီနဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ် ယောက် ကိုရီးယားကို လာလည် တာကြောင့် ဂျယ်ဂျူကျွန်းကို ခရီး ထွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ခရီးမှာ အပျော် ကြီး ပျော်ရမယ်လို့ တွေးထင် ထား ပေမယ့် ယာဉ်တိုက်မှု တစ်ခုကို မျက်မြင် ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး တဲ့နောက် အရာရာဟာ ကမောက် ကမတွေ ဖြစ်ခဲ့ ပါတော့တယ်။
ယာဉ်တိုက် မှုကြောင့် အမျိုးသမီး တစ်ဦး အပြင်း အထန် ဒဏ်ရာ ရခဲ့တာကြောင့် ချန်ဇုတို့ အဖွဲ့ဟာ အမျိုးသမီးကို ကယ်ဆယ်ဖို့ လုပ်နေတုန်း ရဲရောက်လာပြီး သူတို့အဖွဲ့ကို မသင်္ကာ ဖြစ်ခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒီ အချိန်မှာ အမျိုးသမီး က သတိပြန်ရ လာပြီး ရဲကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီး သူတို့ကို ဓားစားခံ အဖြစ် ခေါ်သွား ခဲ့ပါတယ်။
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အမျိုး သမီးဟာ လူသတ်သမား တစ် ယောက်လို့ ယူဆ ရဖွယ်ရှိနေပြီး သူလုပ်သမျှ ကိစ္စတွေနောက်ကို ချန်ဇုတို့အဖွဲ့ တတန်းတန်း ပါနေ ပြီး အဲဒီ အမျိုးသမီးလက်က လွတ် အောင် ဘယ်လိုပဲ ကြိုးစား ကြိုးစား မရခဲ့ပါဘူး။
အတိုက်အခိုက်တွေ ကောင်းလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးက ဘယ်သူလဲ။ အမျိုးသမီး နောက် ပါသွားတဲ့ တရုတ်အဖွဲ့ ဘာအခက် အခဲတွေ ကြုံရမယ်ဆိုတာ ဆက် ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်း ချင်ပါတယ်။
ဂျယ်ဂျူကျွန်း အလှနဲ့ အတူ အပစ်အခတ်၊ အသတ်အပုတ် အက်ရှင် ဇာတ်ကွက်တွေကို ဟာသနှောပြီး ကြည့်ရမှာမို့ ပရိသတ်တွေ သဘောကျ ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Original link - http://www.7daydaily.com/story/52224